मातृ दिवस सबै सर्तहरूको आमाका लागि books पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, नोभेला, कालो उपन्यास, रोमान्स उपन्यास
आज हामी अर्को वर्ष मनाउँछौं आमाको दिन र यो कस्तो छ दिन there त्यहाँ tit शीर्षकहरू छन् सबै शर्तहरु, फर र स्वाद को आमाहरु को लागी। किनकि त्यहाँ एउटी आमा मात्र छ तर सबैको आफ्नै आकृति छ र ती सबैले सबै गर्छन्, तर पढ्न पनि। यी केहि कथाहरू हुन् जसमा उनीहरू तारांकित गर्छन् वा साधारण रूपमा तिनीहरूलाई मजा लिन, सम्झन वा उत्साहित हुनको लागि। तपाईंले उनीहरू सबैलाई बधाई दिनुपर्दछ र छोडेकाहरूलाई पनि सम्झनु पर्छ।
1 वर्तमान कथा माताओं को लागी
1.1 एउटी आमा - अलेजेन्ड्रो पालोमास
2 हास्य भावनाको साथ आमाको लागि
2.1 नाटक आमा हुनु कसरी हुँदैन। Amaya ascunce
3 धेरै काली आमाहरूका लागि
3.1 रेड एन्जिल - फ्रैंक थिलिएज
4 पुरानो आमाहरूका लागि
4.1 सान्ता क्लारा - सबै पाठ्यक्रमहरू - एनिड ब्लाइटन
5 भिक्टोरियन आमाहरूका लागि
5.1 टाढा थ्यामस हार्डी - द मैडिंग भीडबाट
6 ऐतिहासिक आमाहरूका लागि
6.1 फेब्रिक्सको विला - एनी जेकब्स
वर्तमान कथा माताओं को लागी
एक आमा - अलेजेन्ड्रो पालोमास
अलेजान्ड्रो पालोमासको नयाँ उपन्यास यो पुस्तक पसलमा छ अप्रिल २१ बाट। पालोमासको अंग्रेजी फिलोलजीमा बीए छ र स्यान फ्रान्सिस्कोको नयाँ कलेजबाट कवितामा स्नातकोत्तर छ। मा उनको forays पत्रकारिता सँगसँगै हात मिलाएको छ अनुवाद महत्वपूर्ण लेखकहरूको। र लेखकको भूमिकामा उसले प्रकाशित गरेको छ मुटुको समय, धेरै जीवन o द हफम्यान गोप्य.
एक आमा यो एक को चित्र हो को परिवार बार्सिलोना, एक परिवारको आवश्यकता को सम्बन्ध मा एकजुट तर पनि प्रेम र एक महिलाको अद्वितीय रूप। अमलिया, 65 XNUMX, अन्ततः उनको सपना हासिल गर्न गइरहेको छ जुन हो सम्पूर्ण परिवारलाई जम्मा गर्नुहोस् खाना खान नयाँ वर्षको पूर्वसंध्या। यो समय को साथ संचित धेरै चीजहरु को उदा .्ग गर्न र अन्य आशा बाँड्न को लागी आदर्श समय हुनेछ।
हास्य भावनाको साथ आमाको लागि
नाटक आमा हुनु कसरी हुँदैन। Amaya ascunce
को उपशीर्षकको साथ तपाइँको आमाको १०१ वाक्यांश जुन तपाइँले दोहोरिनको कसम खानु भएन, यो पुस्तक एक विडंबनापूर्ण र हास्यास्पद कथा हो जुन लेखक अमया एस्कुनको ब्लगबाट उत्पन्न भएको हो। यो ती सबैको सम्बन्ध हो «राम्रो सल्लाह» ती आमाहरू अक्सर दोहोर्याउँदछन् ती वाक्यांशहरू "चाँडो तपाईंको रस लिनुहोस्, भिटामिनहरू गयो", "म साबुनले तिम्रो मुख धोईदैछु" वा "के तपाईंलाई लाग्छ म स्पेनको बैंकको मालिक हुँ?" आफुलाई कसरी हाँस्न जान्ने आमाहरूको लागि एक धेरै हास्यास्पद प्रस्ताव। वा तपाइँका बच्चाहरूको लागि।
धेरै काली आमाहरूका लागि
रातो एन्जिल - फ्रान्क थिलिज
ती शुगर दिमाग भएका आमाहरू र अपराध कल्पनका प्रेमीहरूका लागि यो सुरुवात हिट कालो श्रृंखला ग्यालिक ध्रुवीय को घटना को घटना हो फ्रान्क थिलिज राम्रो सिफारिश हो। तपाईले कमिश्नरलाई भेट्नु पर्छ फ्रान्क शार्को आफ्नो डरलाग्दो पहिलो केस मा। समान भागहरूमा डर र त्रासलाई पास गर्न।
शार्कोले हामीलाई पहिलो व्यक्तिको अनुसन्धान बताउँदछ जुन उसले ए को देखा पर्छ काटिएको लास, कलात्मक ढंगले काटिएको र छरिएको को विभिन्न कुनामा पेरिस। शार्कोले ढुक्क महसुस गरे कि यो उसको शरीर होइन। एस्पोसाछ महिना भयो हरायो कसैलाई फिरौती माग्न र उसको ठाँउको बारेमा हल्का संकेत बिना। तर यो मात्र हो अपराधको हिमशिलाको टुप्पो त्यो अर्को आउने छ, प्रत्येक अर्को क्रूर।
जिज्ञासाले शार्कोलाई नेतृत्व गर्नेछ अधिक sordid र भ्रष्ट वातावरण मा कल्पनाशील र पागल सम्पर्कहरू अधिक लुकेका भर्चुअल नेटवर्कहरू। र यो सबै पछाडि, क asesino हेरफेर र विकृतिको डिग्रीको साथ जुन थिलिजले एकको साथ सिर्जना र अभिव्यक्त गर्न प्रबन्ध गर्छ धेरै विशेष कौशल र शैली.
पुरानो आमाहरूका लागि
सान्ता क्लारा - सबै पाठ्यक्रमहरू - एनिड ब्लाइटन
के भन्ने भनेर जुम्ल्याहा ओ सुलिवान र उनको सबै साथीहरू सान्ता क्लारा बोर्डि school स्कूल त्यसले ब्रिटिश एनाइड ब्लाइटन सिर्जना गर्‍यो। मेरो पुस्ताका आमाहरूका लागि तिनीहरू हुन् आदिम references हाम्रो बाल्यकाल को। यो सत्य हो कि Blyton को बारेमा सबै कुरा आमा, बुवा र बच्चाहरु को लागी एक संदर्भ हो। उसको पुन: वितरण र नयाँ संस्करणहरू काम रोक्दछ। मेरो लागि, साथ मालोरी टावर्स र पक्कै पनि प्रसिद्ध पाँच, यी मेरो मनपर्ने संग्रह हो।
यो संकलन, क्लासिक चित्रणको साथ, १ 40 s० को दशकमा लेखिएका श्रृंखलाका सबै शीर्षकहरू संकलन गर्दछ:
जुम्ल्याहा स्कूल बदल्छन्
ओ सुलिभन जुम्ल्याहा
सान्ता क्लारा मा जुम्ल्याहा
सान्ता क्लारा मा दोस्रो वर्ष
सान्टा क्लारा मा क्लौडिना
सान्ता क्लारामा पाँचौं श्रेणी
भिक्टोरियन आमाहरूका लागि
पागल भीडबाट टाढा - थोमा हार्डी
Un clásico सबैभन्दा रोमान्टिक भिक्टोरियन उपन्यास को यो शीर्षक हो १ th औं शताब्दीका अंग्रेजी कवि र उपन्यासकार। उनले यसलाई पोस्ट गरे 1874 र यो थियो उनको पहिलो ठूलो हिट र सम्भवतः आफ्नो काम को प्रकारको। यस लेखकका अन्य शीर्षकहरू हुन् Uberville बाट टेस o निलो आँखा।
यो एक को एक धेरै सम्पन्न चित्र हो भिक्टोरियन नायिका, बाथशेवा एभर्डेन। कडा र चरित्रमा स्वतन्त्र, यो जवान मालिक तपाईंको इलाकामा सब भन्दा ठूलो फार्मको, तपाईं सम्भावना र दुविधाको सामना गर्दै हुनुहुन्छ तीन सूटरहरू बीच छनौट गर्नुहोस् त्यो उनको अड्डा छ। तिनीहरू ए सिपाही हस्टलर, एक सरल र नम्र पादरी र एक धनी विधुर। उसको छनौट, तर सबै भन्दा माथि उसको कोर्सस्टेन्ड वातावरण र उसको व्यवहारमा ह्यान्डल गर्न कत्ति गाह्रो छ संसार पुरुषहरू द्वारा बनाईएको हो, यसले नतिजा ल्याउनेछ जुन तपाईंले आशा गर्नुभएन।
२०१ 2015 मा नयाँ र एकदम सहि फिल्म अनुकूलन अ star्ग्रेजी तारा के भित्र थियो? क्यारी मुलिगान र माइकल शीन र बेल्जियम मथियास स्नोएर्ट्स अरूको बीचमा।
ऐतिहासिक आमाहरूका लागि
कपडाको गाउँ - एनी जेकब्स
अन्तमा, टेलिभिजन श्रृंखला को जस्तै ती समर्पित आमाहरूका लागि Downton Abbey वा का उपन्यासहरू केट मोर्टन यो उपन्यास केहि महिनाहरुमा प्रकाशित भइसकेको छ, जुन जर्मनीमा एउटा घटना हो। याकूबको पहिले नै एउटा थियो प्रक्षेपण विधामा, तर यो शीर्षक लेखकको पुष्टिकरण भएको छ उत्कृष्ट विक्रेता.
हामी भित्र छौ अग्सबर्ग १ 1913 १। मा। युवती marie को शानदार भिला को भान्सा मा काम गर्न जान्छ Melzer, एक धनी परिवार कपड़ा उद्योग को लागी समर्पित। अनाथालयमा हुर्केकी मेरी, नोकरहरू मार्फत आफ्नो बाटो बनाउन संघर्ष गरिरहेकी छ र मेलजरहरू उत्सुकतासाथ यसको सुरूको लागि पर्खिरहेका छन् नयाँ जाडो नाच मौसम। त्यो क्षण समाजको लागि सुन्दर प्रस्तुत गर्न को लागी हुनेछ क्याथरीन। तर पावलले, उत्तराधिकारी, बाँकी छ धेरै टाढा उनको परिवारको व्यस्त सामाजिक जीवनबाट र म्युनिकमा उसको विद्यार्थी जीवन रुचाउँछ। त्यो एक दिनसम्म उसले मारीलाई भेट्छ।
हामीसँग विलासी छ हवेली, एक शक्तिशाली परिवार र एक अँध्यारो रहस्यअधिक समस्याग्रस्त समय र एक माया त्यसले सबै कुरालाई जित्दछ। त्यसोभए कसले दिने?
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » मातृ दिवस सबै सर्तहरूका आमाहरूका लागि books पुस्तकहरू